I-Semalt iphakamisa i-Web Power Scraping Tool
I-SEO Spider Tool kumaphepha akho ewebhu uze ulandele izinto eziphambili kwizinto ezikulo, ukwenza kube lula ukuba uhlaziye iphepha lakho le-page kunye ne-off-page SEO. Unokuyikhuphela le nkqubo ngokukhululeka okanye ukhethe isicwangciso sayo sokuqala se-premium ukuze uzuze kwiimpawu eziphambili.
Yintoni ongayenza ngeSoo Spider Tool?
Ngokungafani nezinye iinkqubo eziqhelekileyo zokucoca okanye iinkqubo zokucoca, i-SEO iTracker Tool iguquguquka, iyashesha kwaye isebenzise lula, kwaye ikuvumela ukuba uhlalutye iziphumo kwixesha langempela. Iqokelela idatha, ivumela ii-CEO ukuba zenze izigqibo ezinolwazi. Ezinye zezibonelelo zayo zichazwe ngezantsi.
1. Fumana izixhumanisi eziphazamisekileyo
Ukusebenzisa i-SEO Spider Tool, unokufumana izikhonkco eziphukileyo kwiwebhusayithi yakho kwaye wenze kube lula kuwe ukukhangela amaphepha akho ewebhu. Le nkqubo inqumla isayithi ngokukhawuleza kwaye ifumana izixhumanisi ezifana ne-404. Ngaphezu koko, ilungisa izikhonkwane eziphukileyo kwaye unceda ukufumana iphutha lomncedisi. Ngaloo ndlela, i-SEO iTracker Tool iyisitoreji sedatha esisodwa kunye nesebenzi yokukhwela kwiwebhu. Ufumana ii-URL kwaye uzilungele ngokukhawuleza.
2. Hlaziya ii-Titles ne-Data Data
Unokuhlalutya ngokulula izihloko zephepha kunye nemethadatha ngexesha lokukhwela. I-SEO Spider Tool ilungisa umgangatho weenkcazelo ze-meta kwaye ichonga amaphutha, amagama alahlekileyo, imida emfutshane okanye emide okanye umxholo ophindiweyo kwiwebhusayithi yakho.
3. Ukukhupha Iinkcukacha nge-XPath
Ngoku unokuqoqa kalula idatha evela kwi-HTML yamaphepha ewebhu usebenzisa i-SEO Spider Tool. Inkqubo yeCSS kunye ne-XPath yenza umsebenzi wakho ube lula kwaye ulunge ngaphezu kwezinye izicwangciso zedatha kunye neeprogram. Esi sixhobo siqokelela ulwazi oluvela kumathemitha weemeta, izihloko, izitifiketi zexabiso kunye nokufumana idatha echanekileyo phakathi kweminye imizuzu.
4. Ukuvelisa ii-Sitemaps ze-XML
Enye inzuzo yokusebenzisa i-SEO Spider Tool kukuba ivelisa izixhobo ze-XML kubasebenzisi kwaye iza nezicwangciso zoqwalaselo eziphambili. Unokutshintsha ukuhamba kwexesha kunye nokulayishwa kwekhawulayithi yakho kwaye ufumane ukulungiswa kwendawo kwangoko. Ukongezelela, esi sixhobo sinika iifomathi ezikhethiweyo zokukhetha kuzo.
5. Hlanganisa ne-Akhawunti Yakho ye-Google Analytics
Unokudibanisa okanye udibanise i-SEO Tool Spider nge-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye ulandele idatha efanelekileyo, ukuphucula i-rate bounce, iingxoxo kunye neeseshoni zewebhusayithi yakho.Xa idatha ikhutshwe ngokupheleleyo, esi sixhobo siyakusasaza kwaye siya kukunceda uvelise i-Intanethi.
6. Ukujonga iiRobhothi kunye nezikhokelo
Ngoku kulula ukuba nabani na ukuba bajonge ii-URL ezivaliwe ngamarobhothi. i-txt, i-X-i-Robots izikhombisi kunye nezixhobo zeemeta, ngokubonga kwi-SEO iTracker Tool ukwenzela ukuba kwenzeke. Ilungisa ii-URL eziphukileyo ngokuzenzekelayo kwaye zifumana iziphumo ezifunayo ngokukhawuleza.
7. Fumana okuqukethwe okuphindaphindiweyo
Unokufumana lula ukufumana iphepha lewebhu eliphindiweyo kwi-intanethi usebenzisa i-SEO Spider Tool. Umxholo ophindiwe ngokukodwa ulungiswa ngokuzenzekelayo. I-SEO iTracker Tool ihlola izihloko zephepha lakho, umxholo kunye neenkcazo zekhwalithi, ukuqinisekisa ukuba akukho namaphepha akho ewebhu akopiweyo kumnatha.
8. Ukuhlolwa koMqhubi
Ukuba ufuna ukuhlola isayithi lakho lomkhuphiswano kwaye ufuna ukuqonda uluphi uhlobo lweedatha alikhethile, kufuneka uzame i-SEO Spider Tool. Le yodwa kuphela ye-web scraping kunye neprogram yokukhawulela idatha evumela ukuba uqhathanise indawo yakho kunye nabaphiswano kwaye ufumane ulwazi oluncedo ngokukhawuleza Source .